लोडसेडिङ्गको प्रमुख पात्र, माधव नेपाल भएको खुलासा, यस्तो छ कारण? – Paluwa Khabar
लोडसेडिङ्गको प्रमुख पात्र, माधव नेपाल भएको खुलासा, यस्तो छ कारण?
फागुण ३, २०७७ सोमबार 21
माधव कुमार नेपाल सांगठनिक काममा सक्रिय नेता हुन् । अहिले पनि उनी आफ्नो मनले खाएको कुरामा उत्तिकै खट्न सक्छन् ।
दर्शनका कुरा धेरै नछाँट्ने उनी सामान्य जीवनशैलीमा रमाउँछन् । माधव पार्टीका विचारक होइनन् तर राम्रँ संगठक हुन् ।
माधव छोटो समयमा समयमा धेरै प्राविधिक,सांगठनिक, काम गर्न सक्छन् । राजनीतिलाई सिद्धान्तसँग जोड्न नसक्नु अन्तरमुखी स्वभावका माधवको कमजोरी हो ।
उनको सबभन्दा असल गुण पार्टी्भित्र दास्रो नेताको भूमिका निभाउनुमा देखा परेको हो । सीपी र झलनाथलाई महासचिवको रुपमा लोकप्रिय बनाउन माधवको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो ।
तर,अर्का महासचिव मदनसँग भने माधवको ‘केमेस्ट्री’ अन्तर्घुलित भएन । दासढुंगा घटनाको सेरोफेरोसम्म आइपुग्दा मदन र माधवको आत्मस्यता लगभग टुटीसकेको थियो ।
दासढुंगा दुर्घटनापछि महासचिव बनेका माधवले नेपाल–भारत असमान महाकाली सन्धी गराउने राष्ट्रघाती कदम चाले । पार्टी विभाजन हुन सक्ने खतरालाई नजरअन्दाज गरे ।
आफ्नै हिमायतीहरुलाई मात्र केन्द्रिय समितिमा ल्याएर पार्टी फुटाउने आधार खडा गरे ।
माले–एमाले पुनएकिकरणपछि पूर्वमाले पक्षधरहरुलाई छानीछानी पार्टी बाहिर हुत्याए माओवादीलाई विस्तारित हुने आधार तयार पारिदिए ।
मालेबाट आउका नेता÷कार्यकर्तालाई माधवले आफ्ना ठान्दै नठान्ने, हेयको व्यवहार गर्थे । २०५१ सालमा एमालले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्ने भयो । तर,यसका महासचिव माधवलाई सबैभन्दा ठूलो सकस परिसकेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बन्ने तीव्र आकांक्षा भएपनि निर्वाचनमा भाग नलिएर जोखिम नमालेका कारण माधव संसद्को तल्लो सदनको सदस्य थिएनन् । २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।
माधव प्रतिनिभिधसभाको सदस्य हुन्थे भने मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बन्न कुनै हालतमा दिंदैनथे । रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले राख्ने परम्परा जस्तै थियो,त्यस बेला ।
प्रधानमन्त्री मनमोहनले मुखै खोलेर ‘अरुले देख्दा समेत लाजैमर्दो हुने भयो,कम्तीमा एउटा मन्त्रालय देऊ’ भन्दा समेत माधव टसमस भएनन् ।
यसपछि मनमोहन मन्त्रालयविहिन प्रधानमन्त्री बने । माधव चाहीं उपप्रधान तथा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयको कुर्सीमा आसिन भए । प्रधानमन्त्री हुन नपाएको झ्वाँक उनले मनमोहनलाई मन्त्रालयविहीन बनाउर पोखेका थिए । माधवको चिन्तन बुझ्न यही घटना काफी थियो ।
उपप्रधानमन्त्री भइसकेपछि माधव सरकारले भाडा बेहोर्ने गरी ठूलो घरमा बस्न खोजेका थिए । मन्त्री निवासमा नबसी थप सुविधायुक्त स्थानमा बस्ने उनको दाउ थियो ।
तर,कानुनले मन्त्रीको हैसियत भन्दा धेरै भाडा तिरेर वस्न रोक लगाएको उनले ध्येय सफल हुन सकेन । त्यस बेला मन्त्रीको घर भाडावापत सुविधा मासिक ६ हजार रुपैयाँ थियो ।
त्यति पैसाले माधवले खोजेजस्तो आलिसान निवास भाडामा पाईदैनथ्यो । त्यसपछि उनी मन्त्री निवासमानै खुम्चिन बाध्य भृए । हेर्दा साना लाग्ने यस्ता गतिविधिले माधवको महत्वमकांक्षाको स्तर मापन गर्न सकिन्छ ।
संकुचित सोचले नेतालाई कस्तो बनाउँछ भन्ने मसँग एउटा रमाईलो अनभव छ । २०४६ सालको आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेसका नेता जगन्नाथ आचार्य काँग्रेस तर्फबाट एक्सन कमिटी इन्चार्ज थिए,जति बेला गणेशमानहरु जेलमा थिए ।
वाममोर्चाके कार्यवहाक अध्यक्ष भएकाले मैले जगन्नथासँग नियमित सम्पर्क गर्नुपथ्र्यो । सम्पर्क गर्दा जहिल्यै सब ठीकठाक छ मात्रै भन्थे ।
तर,काँग्रेसका मान्छेहरु उतिसारो आन्दोलनमा देखिंदैनथे । अनि मैले एक दिन सोधें,‘कहाँ के ठीकठाक छ भन्नुहुन्छ,आचार्यजी ? आन्दोलनमा मान्छे आएका छैनन् ।
’भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर वरिपरीका सबै मान्छेहरुलाई मैले आन्दोलनमा आउन भनेको छु । जगन्नाथले जवाफ फर्काए । जगन्नाथको घर भक्तपुरको दत्तात्रय छेउमा कतै थियो ।
यसर्थ आचार्यले दत्तात्रयभन्दा माथि उठेर सिंगो मुलुकको जनता उर्लने आन्दोलनबारे सोचेका रहेनछन् । उनको कुराले मेरो मन अमिलो भयो ।
काँग्रेसले आन्दोलनको ईन्चार्ज त बनाई दियो तर आचार्यले भक्तपुर दत्तात्रयको दायरा नाघ्न सकेनन् । ठ्याक्कै आचार्यजस्तै संकीर्ण सोचका हुन् माधव ।
माधव कति हठी र स्वार्थी हुन भन्ने बुझ्न अर्को अनुभव समेत छ । २०४८ सालमा मनमोहन अधिकारी तल्लो सदन प्रतिनिधिसभाका नेता थिए भने माधव नेपाल माथिललो सदन राष्ट्रसभाको ।
तल्लो सभाका मनमोहन सरह सुविधा माधवले नपाएपछि उनले वर्ष पारिश्रमिक समेत लिएनन् । माधवको चित्त बुझाउन धेरै पटक वैठक वस्यो । पार्टीमा विवाद जन्मियो । तर,माधवले तनाखा बुझ्नै मानेनन् ।
तल्लो सदन भन्दा माथिल्लो सदनका एक सय रुपियाँ मात्रै कमाउन पाउने गरी ऐन संशोधन गरेपछि मात्रै माधवले एक वर्षको एममुष्ठ तलव–सुविधा बुझे ।
एक वर्षसम्म खर्चपर्च पार्टीले जुटाइदिएको थियो । म त्यति बेला पार्टीको आर्थिक विभागमा थिएँ । मैले माधवको तलब–सुविधा बुझेपछि पार्टीले गरिदिएको खर्च फिर्ता हुनुपर्ने कुरा उठाएँ ।
मदनले मेरा कुरा सही ठह¥याएका थिए । त्यसको केही दिनपछि मदन देशव्यापी भ्रमणमा निस्किए । फर्किएपछि निर्णय गराउने वचन दिएका थिए ।
तर,यसैबीचमा मदन दासढुङ्गा काण्डमा पारिए । माधवले पार्टीका तर्फबाट भएको खर्च फिर्ता गरेनन् ।
माधव उपप्रधानमन्त्री हुँदा त्यसपछिको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर उनले रौतहटको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै वजेट पु¥याए । म कृषिमन्त्री छँदा माधवले आफू निर्वाचन लड्ने क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गतको डिप वोरिङ योजनाहरु पारिदिनुप¥यो भनेर आदेशात्मक शैलीका धेरै चिठ्ठीहरु पठाएका थिए ।
अति भएपछि मैले पटकपटक उनलाई मुख खोल्न बाध्य भएँ,‘होइन कमरेड टेलिफोनबाट वा भेटेर भने पनि हुन्छ,यसरी खातका खात चिठ्ठी किन पठाउनु भएको ?’
मुखले भनेको कुराको रेकर्ड हुँदैन । रेकर्ड नभएपछि जनताले मैले काम गरेको वा नगरेको कसरी पत्याउने ? रेकर्ड भए पो काम सफल नभएपनि प्रयत्न गरेको थियो भन्ने हुन्छ’ उनले चिठ्ठी पठाउनुको रहस्य खोल्दा म छक्क परें ।
माधवको यो प्रयासले खुलाउँछ, हाम्रो जेताहरुमा सन्तुलित विकासको चिन्ता छैन । उनीहरु राष्ट्रिय चिन्तन गर्नै नसक्ने प्रवृत्तिले ग्रस्त छन् ।
माधवसँग देश, पार्टी, जनताका लागि केही दिनुपर्छ भन्ने लामो दृष्ट्रिकोण छैन । जस्तोःतत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि नेपाली काँग्रेसमा विवाद चर्कियो ।
त्यतिबेला विश्वबैंकले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिसकेको थियो । माधवले पार्टीमा कसैलाई नसोधी विश्वबैंकलाई चिठ्ठी लेखे,‘खबरदार चुनावअघि अरुण तेस्रोमा विश्वबैंकले हात नहाल्नु ।
’पत्रको आशय थियो निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्छ , अनि मात्रै यो ओयोजना बनाउनुपर्छ ।
तत्काल यो योजना अघि बढेमा त्यसको जस तत्कालिन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारलाई जान सक्ने अल्पदृष्टिले माधवलाई वशीभूत बनायो ।
हाइड्रो प्रोजेक्ट पूरा हुन ६÷७ वर्ष लाग्न सक्छ भन्ने ज्ञानै नभएपछि यस्तै हुन्छ । निर्वाचनपछि एमालेको सरकार बन्ने र त्यसपछि आयोजना निर्माण गर्न लगाएर आफूले जस लिने सोच राखेर माधव विश्वबैंकलाई पत्र लेखेका थिए ।
तर,परिस्थिति आफ्नो कावुलमा कहाँ रहन्छ र ? माधवको चेतावनीयुक्त पत्र विश्वबैंकले योजना स्थगित मात्र गरेन । फेरि योजना ‘लिस्ट’ मा नै नआउने गरी बिच्कियो ।
हुन त आफूले चिठी नलेखेको प्रस्टीकरण माधवले दिएका छन् । म चुनौती दिन्छु,उनको चिठ्ठी अहिले पनि पार्टी कार्यालयमा गएर हेरे हुन्छ ।
अहिलेको लोडसेडिङ्गको एक प्रमुख पात्र हुन्,माधव नेपाल स्विकार्नु,नस्विकार्नु उनको इमानदारीताको कुरो हो । नस्विकार्दैमा सत्य मर्दैन । तथ्य मेटिंदैन ।
राधाकृष्ण मैनालीद्वारा लिखित पुस्तक नलेखिएको इतिहास बाट हामीले साभार गरेका हौं । पुस्तक २९ माघ शनिबार प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा विमोचित गरिएको थियो । –सम्पादक
Prevभा’ग’रथी ह’त्या प्र’करण, काठमाडौँबाट एक जना प’क्राउ
Nextपूर्वयुवराज पारस शाह र रवि लामिछानेबीच पोखरामा रहस्यमय भेटवार्ता
सर्वोच्च अदालतको फैसला, कुन पार्टीमा कस्तो प्रभाव ?
आफ्नो गल्ति स्वीकार गर्दै प्रचण्डले मागे माफी, गरे यस्तो घोषणा ? भयो खल्लीबल्ली